Wokuzilibazisa, Yenza ama-albhamu
Namuhla, ukuba athuthukiswe ngokugcwele futhi ube ngumuntu onobuqambi imfashini kakhulu. Abantu abaningi ababephila ngesikhathi sethu achithe isikhathi esiningi self-ngcono futhi silwele ukukhulisa embule amakhono abo siqu. Ochwepheshe abaningi emkhakheni ukuncoma ukuqala ekushintsheni izimpilo zabo yokufuna idayari futhi wokugxilisa nomkhuba wokuphuza ugcwalise ngempela nsuku zonke. Yomiselela Original ongakhetha isidina ibhizinisi - notebook zokudala. Zama ukuthola ukuthi kuyini nokuthi ukwenza incwadi enjalo ngamarekhodi ngezandla zakhe.
incwadi Art, notebook abantu yokudala, antibloknot - kuyini?
Muva nje, kwakukhona Diaries ka mklamo ongavamile ezitolo zezincwadi ezweni lethu. Izincwadi ezinjengethi ngokushesha yatha- omkhulukazi phakathi abantu babo bonke ubudala futhi ubuchwepheshe. Evamile, zonke lezi pads zingahlukaniswa zibe izinhlobo eziningana.
Uhlobo lokuqala - Diaries ukurekhoda ekhasini ngalinye nge umbala esiyingqayizivele. Yiqiniso, ukubhala incwadi elikhanyayo kuyinto ejabulisa kakhulu ukwedlula uyibhala white iphepha.
Eyesibili uhlobo wama-notebook zokudala - Diaries, kuwo wonke amakhasi ukuthi libhalwe quote ezinye ngohlakaniphile yini noma iseluleko ewusizo. Kule ncwadi ingaqukatha ulwazi babevela ezindleleni eziningi zokuphila, noma anikelwe ngesihloko esithile emincane.
Isigaba sesithathu - ukwakheka notebook-lukwazi ukushukumisa. Lena incwadi yamarekhodi nge umsebenzi nsuku zonke. Ethandwa kakhulu uma Diaries kulesi sigaba - yabaculi (ngokulandelana, ekhasini ngalinye kuzokusiza ukushiya umdwebo), noma i-ababhali, nge uhlu ngezihloko ze mini-izindaba nemibono ezithakazelisayo. Esinye isigaba wama-notebook abantu yokudala esihlanganisa zonke esedlule.
Diaries Universal ngobuciko ahlinzekwa ngokushesha ukwenza imisebenzi engavamile empilweni yangempela (nokubhala emakhasini incwadi izifingqo zama), ukuvivinya umzimba elula ngokwengqondo, ukudweba nokubhala bezigabisa. ngisho notebook ukugcwalisa ngokuhlanganyela ingatholakala uma uthanda.
Thenga noma ukwenza izandla zakho siqu?
Art notebook nge izabelo namuhla kulula ukuthenga nganoma iyiphi esitolo sezincwadi. Izindleko amabhuku anjalo okufakiwe uqobo ruble 300 1000. "Kungani ayebiza kangaka?" - You buza. notebook Creative ngokuvamile has a eliphezulu ngibopha futhi ikhava, ikhwalithi iphepha nowokunyathelisa akuyona kunabayeni le ncwadi, futhi ungakhohlwa mayelana nokuqukethwe kwalo ngemibono. Ububi kuphela lokhu ukuthola ukuthi ngisho ukuthenga idayari ngokwakho, awukwazi qiniseka ukuthi uyobe othanda it, uze uqale uligcwalise. Ngakho kungani ukulondoloza futhi ungazami ukwenza notebook zokudala imisebenzi ngezandla zabo?
Incwadi yamarekhodi: Master Class
Masiqale ukwenza kwethu art-idayari ukulungiselela phansi. Yiqiniso, wena umane uthenge incwadi eliphezulu a noma incwadi yamarekhodi bese nje ugcwalise ikhasi. Kodwa le ndlela akuyona ezithakazelisayo, ejabulisa kakhulu ukwenza siqu notebook yakho ehlukile ngaphandle nangaphakathi. Lungiselela inani elidingekayo amashidi. Sika yobukhulu akhethiwe, njengoba raskraste oyifunayo, ukuhlobisa kufa, izibalo ezincane, Figure aphathe esifundeni. Okunzima kakhulu ingxenye umsebenzi - okwenza kudoti. Amakhasi incwajana kungenziwa crosslinked nomunye, ukunamathisela noma okuyisisekelo ngokusebenzisa hardware - iringi entwasahlobo. Njengoba nje block ngamarekhodi Ukulungele, usungaqala ukuklama ikhava.
Akunandaba engibathandayo eniwenzayo notebook zokudala - wena noma njengesipho. Le ncwadi yezenzakalo kufanele ezihlotshiswe kahle futhi kubangele imizwa emihle kuphela. Thatha isikhathi esingakanani okufanele usichithe isikhathi esanele futhi ukunakekela umsebenzi ekhaveni. It kungenziwa embozwe Indwangu, ukuhlobisa ikhadi enhle noma umdwebo noma ababambelela isithombe sakho ozithandayo. Ohlangothini kwangaphakathi bethela bookends, ngiyabonga kubo umsebenzi wakho izobukeka kwenetha okuningi. Cover lunamathele amarekhodi iyunithi bese ubeka incwadi ngaphansi cindezela. Njengoba nje notebook yakho esomile, ungakwazi uqhubekele ingxenye ezithakazelisayo kakhulu umsebenzi.
Ukugcwalisa idayari okudala
Qala incwadi yamarekhodi ne ishidi kombhali. Makube mini-iphrofayela indaba mayelana nendlela umuntu notebook zokudala izabelo fanele, futhi, mhlawumbe, a okukhuluma kancane. Believe me, basayine iyiphi idayari - lena isiko ekhethekile. Ngisho kule nguqulo ibhizinisi ngokugcwalisa ulwazi oluyisisekelo mayelana nawe bese ushiye inombolo yakho yocingo uma ukulahlekelwa notebook, wena ngalokhu uthanda ukumemezela ubunikazi isihloko. Incwadi zokudala ukurekhoda okufanayo zingafakwa Kwelinye lamakhasi lokuqala isithombe sakho, nje qinisekisa ukuthi omuhle kakhulu futhi ozithandayo. Manje ungakwazi ukugcwalisa wonke amakhasi asele. Uma nizizwa nesaba lapho ukuthi uqale ngezikhathi behlukanisa uhlobo olufanayo lomsebenzi, ngiyilobe ngokuqondile ngezikhathi. Ake sithi wena kuqeda namakhasi yokubhalisa 5th, Swayipha kuya 10 bese uqala ngokuphepha ngokubhala noma yimuphi umsebenzi noma umqondo. Ngaphezu imisebenzi, ungabhala yokuvalelisa elula yena, izingcaphuno ozithandayo noma motivators omuhle omfushane.
Imisebenzi ukuthi uyonifundisa ukucabanga ngale
Uma unquma ukwenza ngezandla notebook imibono yabo creative efika engqondweni lapho ukugcwalisa emakhasini ayo kungase kubonakale silly ngesikhathi sokubhala. Kodwa ungabi namahloni imicabango yakhe siqu. Bhala noma yini efika engqondweni. Ngisho noma umsebenzi othize alifundisi yini, futhi kuyoba engenamsebenzi, kuyoba kukhanye up usuku kakade futhi sazise ezimnandi. Ngokwesibonelo, cishe zonke idayari siphelile zokudala ungathola amathiphu alandelayo nezeluleko: abhalele umngane, nabo isikhathi eside musa ukuxhumana; Zama okusha; bhala phansi ukuthi iyini ukhunjulwa namuhla; ukudweba isithombe; chaza ukuthi ukhathazekile kakhulu mayelana namuhla.
Kubantu abahlala isigqi asebenzayo, ezithakazelisayo kakhulu kangakanani notebook zokudala ezimbili. Le ncwadi yezenzakalo ligcwele abangane ababili oseduze noma lonke iqembu labangane. Ngakho, inkomba ekulo yenzelwe umsebenzi ngokuhlanganyela. Zingase zibekwe imibuzo mayelana yokuchitha isizungu ngokuhlanganyela, ukunikela ukuchaza nomunye, noma ngisho ukudweba caricature. Ungesabi ukufaka notebook imisebenzi ezingalindelekile, futhi uqiniseka ukuthola okungcono kakhulu kuzo "inkhulumomphendvulwano" ngethi esiphelele.